अपडेट छैनन् सरकारी वेबसाइट
लमजुङ । प्रविधिमैत्री सेवा दिन जिल्लाका कार्यालयले सुरु गरेका वेबसाइट प्रयोग विहीन बनेका छन्। वेबसाइट ‘अपडेट’ नहुँदा सेवाग्राहीले लाभ लिन सकेका छैनन्। छिटो जानकारी लिन वेबसाइट हेर्ने चलन बढ्दै गए पनि कर्मचारीले अपडेट नगरिदिँदा कार्यालयको वेबसाइट पुरानै सूचनाले भरिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको साइट डीएओलमजुङ डट मोह डट जीओभी डट एनपी र जिल्ला समन्वय समितिको डीएओलमजुङ डट जीओभी डटएनपीले आफ्नै कार्यालयका गतिविधिसमेत अपडेट गरेका छैनन्।
वेबसाइटमा राखिएका कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीको जानकारी ‘भद्रगोल’ छ। तीन वर्षअघि सरुवा भएर गएका र आएका प्रमुखको जानकारीसमेत अपडेट छैन। प्रशासन कार्यालयले साइटमा ४४ जना कार्यालय प्रमुखको नाम, पद, कार्यालयको नम्बर छ । २८ कार्यालयका सूचना अधिकारीको नाम र सम्पर्क नम्बर छ। जिससले २९ कार्यालयका प्रमुखको नाम, पद र सम्पर्क नम्बर राखेको छ । तर, अधिकांश अपडेट छैनन्।
श्रीजंग गणका गणपति प्रमुख सेनानी सुभांगत कटवाल एक वर्षअघि सरुवा भए पनि साइटमा उनकै नाम छ । उनीपछि आएका माधव थापा पनि सरुवा भइसके । डीएसपी समीरचन्द्र खरेलको नाम साइटमा अझै छ। तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको डीएसपीमा ७ महिनादेखि पदमबहादुर विष्ट प्रमुख छन्। शिक्षा अधिकारी ज्ञानमणि नेपाल सरुवा भएको तीन वर्ष भइसक्यो। त्यसपछि खड्गबहादुर कमाल आएर पनि गइसके। अहिले गोपालप्रसाद कँडेल छन् । प्रशासनको साइटमा भने शिक्षा अधिकारी नेपाल नै छन्।
वरिष्ठ पशुविकास अधिकृत डा. दीर्घनाथ ढुंगाना डेढ वर्षअघि सरुवा भएका हुन्। अहिले वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. लक्ष्मणबहादुर ढकाल छन् । प्रशासनको साइटमा ढुंगानाकै नाम छ । वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत सतिश विष्ट तीन वर्षअघि सरुवा भएका हुन् । उनीपछि टंकप्रसाद चापागाईं र उनी गएपछि केवशप्रसाद चापागाईं जनस्वास्थ्य प्रमुख छन्। तर, प्रशासनको साइटमा विष्टको नाम हटेको छैन ।
प्रशासनको आफ्नै कार्यालयमा रहेको अनुसन्धान कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृत फेरिए पनि साइटमा फेरिएको छैन । कुलबहादुर खड्का सरुवा भएर वासु कलौनी आए । उनी सरुवा भएपछि सरोज निरौला अहिले अनुसन्धान अधिकृत छन् । प्रशासन कार्यालयले आफ्नै सूचना अधिकारी सहायक प्रजिअ कृष्णप्रसाद पौडेल सरुवा भएर गए पनि वेबसाइटबाट उनको नाम, पद र जिम्मेवारी हटाएको छैन । अदालत, प्रहरी, कृषि, जनस्वास्थ्य, मालपोतलगायत अधिकांश कार्यालयका सूचना अधिकारीको अद्यावधिक हुन सकेको छैन ।
जिससको वेबसाइटको अवस्था पनि उस्तै छ। कार्यालयसँगै शिक्षा, जनस्वास्थ्य, कृषि, राष्ट्रिय अनुसन्धानलगायत कार्यालय प्रमुखको अद्यावधिक वेबसाइटमा गरिएको छैन । प्रशासनको वेबसाइटमा राहदानी आएको जानकारी र जिससको साइटमा भूकम्प लाभग्राहीको सूचनाबाहेक अरू जानकारी अपडेट हुन सकेका छैनन्।
लमजुङमा ८ वटा स्थानीय तह छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आइसकेका छन्। तर, सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा पुरानै संरचनाको सूचना राखिएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनपछि कर्मचारी दायाँबायाँ भएका र बाँकी रहेका कर्मचारीले राम्रोसँग काम नगर्दा वेबसाइट अद्यावधिक हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख बताउँछन्।
प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०७४, बुधबार
कालीकोटमा १० वर्षमा ८ हजार जनसङ्ख्या वृद्धि